Khilaaf soo kala dhex galay Guddoonka Baarlamaanka Hirshabelle | Jowhar Somali news Leader
Home News Khilaaf soo kala dhex galay Guddoonka Baarlamaanka Hirshabelle
Khilaaf soo kala dhex galay Guddoonka Baarlamaanka Hirshabelle
Waxaa soo if baxaya khilaaf dhinaca maamulka ah oo u dhexeeya Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabelle Sheekh Cismaan Barre Maxamed oo hadda ku sugan magaalada Muqdisho iyo Guddoomiye ku xigeenka labaad ee Baarlamaanka Canab Axmed Ciise oo joogta magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle.
Khilaafkan ayaa ka dhashay kadib markii kusimaha guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle Marwo Canab Axmed Ciise ay ku amartay xildhibaanada baarlamaanka inay dib ugu soo laabtaan caasimada Hirshabelle ee Jowhar kahor 19ka bishan oo ku beegan Arbacada soo socota.
Fariin loo direy xildhibaanada ayaa u qornayd sidan; “WARGELIN. Dhammaan xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabelle waxaa lagu wargelinayaa inay yimaadaan Xarunta Baarlamaana DGHSH ugu dambeyn maalinta Arbacada oo taariikhdu tahay 19/08/2020 si loo dardargeliyo howsha dastuuriga ah ee horyaala Baarlamaanka Hirshabelle. Mahadsanidiin Xog/K/Golaha.”
Hase yeeshee Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabelle ayaa farriin taas ka soo horjeeda u direy xildhibaanada Baarlamaanka iyadoo u qorneyd sidan;
“Amar ka soo baxay Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabelle ayaa dib loogu dhigey fariintii hore ee loo diray baarlamaanka waxaana loo soo diri doonaa fariin labaad oo ajandaysan.”
Hase yeeshee Marwo Canab Axmed Ciise oo haatan ah kusimaha Madaxweynaha Hirshabelle ayaa iyadoo ka careysan fariintan lagu joojiyay amarkeedii hore ayaa xildhibaanada u dirtey fariin labaad oo u qorneyd sidan;
“AMAR Dhammaan xildhibaanada waxaa lagu amrayaa inay yimaadaan BDGHSH kahor maalinta Arbacada. FG Guddoomiyaha Baarlamaanka waxaa ka yaala mooshin xaqna uma laha in uu fariin diro. Xildhibaan si aad u gudato waajibkaaga dastuuriga waa inaad imaataa xarunta Baarlamaanka Dowlad Goboleedk Hirshabelle BDGHSH.”
Khilaafkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo inta badan xildhibaanada baarlamaanka Hirshabelle ay ka maqan yihiin caasimada Hirshabelle iyadoo badankood ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho.
Guud ahaan Baarlamaanka Hirshabelle ayaa mudada jiritaankiisa waxa ka harsan wax ka yar labo bilood iyadoo aysan muuqan haatan sansaan lagu doonayo in baarlamaan cusub lagu soo dhiso.
Sawirro: Madaxweynaha Galmudug oo tababar u soo xiray dufcadii 1aad Ciidanka Daraawiishta
Duulimaadyadii Garoonka diyaaradaha oo hakad galay iyo muran ka dhashay…